मलेसियामा नेपाली कामदारहरुलाई शोषण गर्ने कम्पनीमा जाँचबुझ सुरु, मुद्दा जिते यति पैसा पाउने ? - ramechhapkhabar.com
मलेसियामा नेपाली कामदारहरुलाई शोषण गर्ने कम्पनीमा जाँचबुझ सुरु, मुद्दा जिते यति पैसा पाउने ?
तर कम्पनीले अदालतको आदेश पछि उच्च अदालतमा त्यस विरुद्द अपिल गरेको छ । सो कम्पनीले आफूहरुको श्रम शोषण गरेको भन्दै नेपाल, बंगलादेश लगायतका मुलुकका १ सय ८५ श्रमिकले सन् २०१९ र २०२० मा मुद्दा दायर गरेका थिए । गुड ईयर विश्वकै ठूलो टायर निर्माता कम्पनी मध्येको एक हो ।